Curso de birmanês > português| Números | Tradução
Curso birmanês - Números
Um တစ် / ၁ - titʔ
Dois နှစ် / ၂ - nhit'
Três သုံး / ၃ - thouN
Quatro လေး / ၄ - léi
Sete ခုနှစ် / ၇ - kouN nhit'
Oito ရှစ် / ၈ - chit ?
Dez တစ်ဆယ် / ၁၀ - thit sai
Onze ဆယ့်တစ် / ၁၁ - seʔ titʔ
Doze ဆယ့်နှစ် / ၁၂ - seʔ nhit'
Treze ဆယ့်သုံး / ၁၃ - seʔthouN
Catorze တစ်ဆယ့်လေး / ၁၄ - seʔ léi
Quinze တစ်ဆယ့်ငါး / ၁၅ - seʔ ŋa
Dezasseis တစ်ဆယ့်ခြောက် / ၁၆ - seʔ chaukʔ
Dezassete တစ်ဆယ့်ခုနှစ် / ၁၇ - seʔ kouN nhit
Dezoito တစ်ဆယ့်ရှစ် / ၁၈ - seʔ chitʔ
Dezanove ဆယ့်ကိုး / ၁၉ - Seʔ ko
Vinte နှစ်ဆယ် / ၂၀ - nhit sai
Vinteeum နှစ်ဆယ့်တစ် / ၂၁ - nhit seʔ titʔ
Vinteedois နှစ်ဆယ့်နှစ် / ၂၂ - nhit seʔ nhit'
Vinteetrês နှစ်ဆယ့်သုံး / ၂၃ - nhit seʔ thouN
Vinteequatro နှစ်ဆယ့်လေး / ၂၄ - nhit seʔ léi
Vinteecinco နှစ်ဆယ့်ငါး / ၂၅ - nhit seʔ ŋa
Vinteeseis နှစ်ဆယ့်ခြောက် / ၂၆ - nhit seʔ chauk
Vinteesete နှစ်ဆယ့်ခုနှစ် / ၂၇ - nhit seʔ kouN nhit
Vinteeoito နှစ်ဆယ့်ရှစ် / ၂၈ - nhit seʔ chitʔ
Vinteenove နှစ်ဆယ့်ကိုး / ၂၉ - nhit seʔ ko
Trinta သုံးဆယ် / ၃၀ - thouN sai
Trintaeum သုံးဆယ့်တစ် / ၃၁ - thouN seʔ titʔ
Trintaedois သုံးဆယ့်နှစ် / ၃၂ - thouN seʔ nhit
Trintaetrês သုံးဆယ့်သုံး / ၃၃ - thouN seʔ thouN
Trintaequatro သုံးဆယ့်လေး / ၃၄ - thouN seʔ léi
Trintaecinco သုံးဆယ့်ငါး / ၃၅ - thouN seʔ ŋa
Trintaeseis သုံးဆယ့်ခြောက် / ၃၆ - thouN seʔ chauk
Quarenta လေးဆယ် / ၄၀ - léi sai
Cinquenta ငါးဆယ် / ၅၀ - ŋa sai
Sessenta ခြောက်ဆယ် / ၆၀ - chauk sai
Oitenta ရှစ်ဆယ် / ၈၀ - chit ? Sai
Cem တစ်ရာ / ၁၀၀ - titʔ ya
Centoecinco တစ်ရာ့ငါး / ၁၀၅ - titʔ ya ŋa
Duzentos နှစ်ရာ / ၂၀၀ - nhit ya
Trezentos သုံးရာ / ၃၀၀ - thouN ya
Quatrocentos လေးရာ / ၄၀၀ - léi ya
Milequinhentos တစ်ထောင့်ငါးရာ / ၁၅၀၀ - titʔ taung ŋa ya
Dois mil နှစ်ထောင် / ၂၀၀၀ - nhit taung
Dez mil တစ်သောင်း / ၁၀၀၀၀ - titʔ thaung